Can 2019 : Efa niainga omaly tany Guinée ny Barea -
AccueilVaovao SamihafaCan 2019 : Efa niainga omaly tany Guinée ny Barea
Can 2019 : Efa niainga omaly tany Guinée ny Barea
16/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Omaly tolakandro no niainga tany Guinée ny ekipam-pirenena Malagasy, hiverina an-tanindrazana. Raha tsy nisy ny fiovana dia tokony omaly tamin’ny 9 ora alina no nigadona teny Ivato ny Barea. Anio tolakandro anefa ny lalao miverina hifandonany amin’i Guinée, izay efa resy tamin’isa 1-0 tamin’ny lalao mandroso. Azo lazaina fa dingana lehibe ho an’ny Barea io lalao miverina io, izay ahazoana tapakila hihazo an’i Cameroun.
Somary nisafotofoto tamin’ny ankapobeny ny fiverenan’ny Barea an-tanindrazana, satria raha noheverina fa omaly maraina no niainga tany Malabo ny fiaramanidina hitondra ny ekipa roa tonga, dia ny tolakandro izany vao niainga. Raha efa nahafantatra izany mialoha ry zareo Gineana, dia nitonantonana niandry ny fiaramanidina teny amin’ny seranana kosa ny barea.
Manana tombony amin’ny herintsaina anefa ny Barea noho ilay fandresena azo tany an-tanin’olona, ary hilalao an-tanindrazana ihany koa.
Efa nisy ny lamina napetraky ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, mba hisian’ny fandaminana amin’ny lalao anio tolakandro eny Vontovorona. Ao anatin’izany ny fisokafan’ny kianja manomboka amin’ny 7 ora maraina, ny fisian’ny teorana 12 hivarotana ny karatra, ka ny 2 amin’izany ho an’ireo mitondra kodiaran-droa, izay efa misy toerana natokana hiantsonan’izy ireo eny an-toerana.